Inja Yegazi Yegazi Inzalo & Izici - Izinhlobo
Inja Yegazi Yegazi Inzalo & Izici
Ama-bloodhounds ayizinhlobo zasendulo, futhi imvelaphi yawo ayicaci. Kodwa-ke, ngekhulu lesi-7, uSt. Hubert (usanta ongumvikeli womzingeli) nezindela zakhe baba nesandla esikhulu ekuthuthukiseni lolu hlobo.
Ama-Bloodhounds namuhla asabhalisiwe ne-FCI njenge Izinja zaseSt. Hubert . Igama elithi 'Bloodhound' lisuselwa egameni elithi 'hound enegazi,' okusho indawo yokuzalela okumsulwa.
Izici kanye ne-Temperament
Izinkinga Ezikhethekile Zezokwelapha
Incazelo kanye ne-Standard
Ama-bloodhound ahlotshaniswa kakhulu nobukhosi: UWilliam the Conquerer wafika eNgilandi enama-bloodhound amaningana. Ama-bloodhound ayevame ukunikezwa njengezipho phakathi kobukhosi kanye nezikhulu.
Cishe iminyaka engamakhulu ayisikhombisa, iSt.Hubert Monastery yathumela ama-Bloodhound amnyama namnyama eNkosini yaseFrance unyaka nonyaka. La ma-hounds nama-Talbot hound amhlophe athathwa njengokhokho bama-Bloodhound anamuhla.
Abokuqala babulawa yiFrance Revolution ngemuva kokuduma kwabo kwehla lapho uCharles IX ethanda ama-hounds amhlophe. Ama-Bloodhound anamuhla asuselwa kuma-hound alethwe nguWilliam uMnqobi eBrithani.
Kwaze kwaba cishe ngekhulu le-16 lapho i-Bloodhound yasetshenziselwa ukulandela umuntu. Babethathwa njengabazingeli bezinyamazana ezinkulu ngaphambi kwalokho: izinyamazane, njll. Ubufakazi babo babuthathwa kakhulu kangangokuthi babenelungelo elisemthethweni lokulandela umzila noma yikuphi, kubandakanya nasemakhaya.
Ngenkathi isidingo sikhula ngezinja ezincane, ezisheshayo, i-Bloodhound yawela ngezinhlobo ezahlukahlukene zokukhiqiza amaHarriers, amaBeagles, nokunye, konke lokhu okukhipha ikhala labo kumaGazi. Ukusetshenziswa kwe-Bloodhounds kwehlile ngenxa yokwanda kwabantu kanye nokwehla kwendawo yemidlalo eBrithani kwaze kwaba nokuncane okuncane okushiyekile.
Ukwethulwa kwemibukiso yezinja ngo-1859 kwavuselela lolu hlobo. Izilwane ezinobungani obuningi, ezilungele ukukhonjiswa, ziholele.
Ngo-1898, abalimi be-Bloodhound baqala ukukhuthaza izivivinyo zabesilisa zokuzingela njengomdlalo. Izilwane kuphela ezazitholakala ngalokhu kwakuyizo ezazifuyiselwe umbukiso nomngane iminyaka eminingi; nokho amakhala abo ayebukhali njengakuqala.
AmaFoxhound awele ama-Bloodhound amahlandla amaningi, ikakhulukazi ngemuva kweWWII, lapho isitoko siphele kakhulu eBrithani. Lokhu okhokho kwesinye isikhathi kubonakala njengokumakwa okumhlophe kuma-Bloodhound yize ukumakwa nakho kungabuyela emuva kumaTalbot Hound amhlophe.
Ukumakwa okunjalo akukuvumeli ukukhombisa isikhathi eside njengoba kugcinwe esifubeni, ezinzwaneni, nasemsileni womsila.
Ngokuphikisana nokuhlakanipha okudumile, ama-Bloodhound awazange asetshenziselwe ukulandela umkhondo wezigqila ezibalekile e-US. Lezo zinja imvamisa kwakuyiziphambano ze-mongrel nobushushu obubi, i-Bloodhound engenazo. Stowe’s Umalume Tom's Cabin , incwadi, kanye ne-movie, ikakhulukazi, kunikeza ukuboniswa okungalungile ngokweqile kwe-Bloodhounds.
I-Mantrailing ijabulele ukwanda okuguqukayo, yize kungenjalo njengesiqhumane, ekusetshenzisweni komthetho kwanamuhla nokusesha nokutakula. Imizila eyenziwe yi-Bloodhound ingubufakazi obuvumelekile enkantolo.
Ama-bloodhound awawona wonke umuntu. Ngenxa yokundiza okunomusa, bangaphonsa amathe izinyawo ezingama-20 ngokunikina ikhanda elilodwa. Usayizi wabo omkhulu, izidingo zokudla, izikweletu ze-vet, kanye nempilo emfushane yokuzalwa kubenza babe abangane abangabazisayo besithandwa senja esivamile.
Njengemidlwane, i-Bloodhound izokhula ngamakhilogremu amane kuya kwayisikhombisa nengxenye eyodwa kuya kweyodwa ukuphakama ngesonto. Njengoba kujwayelekile ezinja ezinkulu, zinempilo emfushane yeminyaka eyi-10.
Ama-bloodhound anobungane, imvamisa muhle kakhulu ezinganeni. Lapho bethola umuntu ekugcineni kwethrekhi, kungenzeka bababambe - ukutshala ukumanga okumanzi (okukhethekile) kwabo bonke.
Izigebengu zivame ukuzinikela khona lapho kunokuba zibhekane nama-Bloodhound, noma ngabe abalekela ukuqabulwa noma enkolelweni eyiphutha yobudlova babo kwesinye isikhathi kunzima ukukusho!
Ama-bloodhound azimisele kakhulu. Banolaka ngomqondo wokuthi bazofuna ukuqeda imizila, nokuthi kungaba nzima ukubamba kanye kuthrekhi. Kungaba nzima ukuqeqesha i-off-leash ngalesi sizathu. Kodwa-ke, ngokuvamile abahlukumezi ezinye izinja noma abantu.
Isikhumba esihlezi esisezindlebeni nasemehlweni azowela phansi phezu kwamehlo abo lapho behlisela ikhanda labo emzileni, babaphuphuthekise. Ngenxa yalokhu nokuzimisela kwabo, ama-Bloodhound avame ukuqhutshwa nge-leash ukuphepha kwabo.
Ama-bloodhound angenza imisindo ehlukahlukene emangalisayo. Bangakwazi ukuzwakala ngokucacile, bahewule futhi bakhale, konke ngamathoni amnandi. Omakhelwane kungenzeka bangakwazisi lokhu, noma kunjalo.
Ama-bloodhounds angaba ne-hip dysplasia, isifo esingahle sikhubaze. Abazalisi kufanele bahlole sonke isitoko sabo sokuzalela nge-OFA ukunciphisa amathuba okuthi imidlwane yabo ibe ne-HD.
Ama-Bloodhounds, ngenxa yesimo sawo somzimba, athambekele kakhulu kuGastric Torsion noma Bloat njengoba ibizwa kakhulu. Qiniseka ukuthi uxoxa ngeBloat nodokotela wezilwane, ikakhulukazi ukuthi ziyini izimpawu zomzimba nokuthi ungalutholaphi usizo oluphuthumayo lwezilwane ngemuva kwamahora.
Lesi simo singabulala izinja emahoreni ambalwa futhi sivame kakhulu kulolu hlobo.
Eminye imithombo yolwazi:
Njengomthetho, ama-Bloodhound (nezinye izinhlobo ezinobukhulu obufanayo), awahlali isikhathi eside njengoba kwenza ozakwabo abancane. Impilo ejwayelekile ye-Bloodhound icishe ibe neminyaka eyi-9-11 ubudala, ngokuguga okubonakalayo kwenzeka eminyakeni eyi-8 ubudala.
Ama-bloodhound angahle athambekele kuwo ukungena okuwukuguqulwa kwejwabu leso okungaba buhlungu kakhulu futhi kuyicasule inja. Ukuhlinzwa ngokuvamile kuyadingeka ukulungisa ijwabu leso.
Inani eliningi lama-Bloodhound linokungezwani komzimba kanye / noma ukudla nokuzwela kwempova.
Ama-bloodhounds angomndeni omkhulu kunawo wonke futhi anamandla kakhulu emndenini we-hound.
Zinesisindo esifinyelela ku-110lbs / 50kg futhi zimi ngokulingana no-27in / 69cm emahlombe. Banobuso obushwabene obucace bha ngama-flews amenyezelwe kanye namazolo (izindebe nomphimbo), okubanika ukubonakaliswa okuhlonipheke kakhulu.
Ijazi lincane, liqinile futhi lifushane. Imibala imnyama futhi i-tan, i-tawny, noma ibomvu futhi i-tan (kwesinye isikhathi kusetshenziswa 'isibindi' esikhundleni se 'tan'). Amehlo awacwile futhi awagqamile, yize isikhumba esingeqile singadonsela izinkophe ezingezansi phansi.
Izindlebe zilenga phansi futhi zinde futhi zithambile. Ziluhlobo olungajwayelekile; uzobona kuphela ezimbalwa, uma zikhona, emibonisweni eminingi yezinja.
I-AKC Bloodhound Standard
Izinga “liyipulani” ebonakalayo yohlobo. Ichaza ukubukeka komzimba kanye nezinye izimfanelo ezifunwayo zohlobo oluthile olwaziwa ngokuthi uhlobo. Ezinye izici, njengosayizi, ikhwalithi yengubo, nokunyakaza, zisuselwa emsebenzini woqobo (noma wamanje) wenja.
Ezinye izici ziyizimonyo kakhulu njengombala wamehlo, kodwa uma zihlanganisiwe zihlukanisa lolu hlobo ngaphandle kwazo zonke ezinye. Izinga lichaza omele kahle lolu hlobo. Ayikho inja engaphelele, kepha Izinga linikeza umfuyi ithuba lokuthi aphokophele kulo.
Ngenxa yokukhathazeka nge-copyright ngokuqoqwa kwawo wonke amaZinga kunoma isiphi isayithi elilodwa eligcina yonke imibuzo, amaZinga we-AKC awafakiwe kuma-faq e-Breed. Umfundi udluliselwa ezincwadini ezisekugcineni kwalo mbhalo noma eNational Breed Club ukuthola ikhophi yeZinga.
Ukuluma komdlwane onamasonto ayisishiyagalombili
i-pitbull lab mix izokwanda kangakanani